မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲ စုံတွဲများ...
Posted by mabaydar at 10:47 PM
ကိုးရီးယားမင်းသားတွေက ...တူနဲ့တယ်း)
မင်းသမီးတွေကတော့ ချစ်စရာကောင်းတယ်း)
Our taste of drama is almost alike (except JP drama since i don't follow the JP drama that much). My all-time-fav couples are ISWAK, Mentor Garden and of course Secret Garden :D
I think they are irreplaceable ones for those characters.
3/17/2012 11:57 AM
3/17/2012 9:15 PM
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) ရေ... မဗေဒါ ရေးထားတာ ကိုရီးယားကား တစ်မျိုးထဲဟုတ်ဝူး... ဘာပဲပြောပြော ပိုစ့်ကို စိတ်မ၀င်စားပဲ ကွန်မန့်သွားတဲ့အတွက် ခင်မင်မှုကို တန်ဖိုးထားပါတယ်...
Anonymous ရေ... ထိုင်ဝမ်ကားတွေက ကိုရီးယားလောက် ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့တာ မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ အဲဒိ ISWAK နဲ့ Meteor Garden ကိုတော့ ထိုင်ဝမ်ကိုပဲ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်... Secret Garden ကိုကြည့်ရင်း အဲဒိမင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက ချောလွန်းပြီး လိုက်လွန်းလို့ လူအစစ်တွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား ဘယ်ကုသိုလ်များလဲလို့ တွေးမိတယ်... ကျန်တဲ့ကားတွေရော ကြိုက်တာတွေရှိသေးလား...
မအေးသက်ရေ... အပေါ်က ရေးထားတဲ့ထဲက ဘယ်ကားတွေက ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်ကားတွေက မကြည့်ရသေးတာလဲဟင်.... တခြား ကြိုက်တဲ့ ကားတွေရှိရင်လဲ ရှယ်သွားပါအုံး... နောက်လဲ ကြိုးစားပြီးရေးပါ့မယ်... ရုပ်ရှင်အကြောင်း ၁ပုဒ်ရေးမယ်ဆို အဲဒိရုပ်ရှင်ကို အရသာပြန်ခံစား လိုအပ်တဲ့ data တွေရှာဆိုတော့ အချိန်အတော်ပေးရတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခုလို့ ၀ါသနာတူ အားပေးတဲ့သူတွေရှိတာသိရတော့ ရေးရကြိုးနပ်တာပေါ့...
ကျွန်တော်လည်း F4 မင်းသားတွေကိုပိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားတွေက ပိုချောတယ်နော်။ အသက်ငယ်တာလဲ ပါမယ်ထင်တယ်နော်။ :) ရုပ်ရှင်တွေ အများကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
3/18/2012 12:43 AM
သားးက ဟန်ဂျီအင်းပါတဲ့ ကားတွေအကုန်ကြီုက်တယ်..ချစ်စံအိမ်ကိုကြောတာနော် တူမှတူပဲ ခိခိ
3/18/2012 9:52 AM
who are you နဲ့ meteor garden ပဲမကြည့်ရသေးတာ ခုစကြည့်နေပြီ။ 49days ထဲကမင်းသားကိုမကြိုက်ဘူးလား
သူအကြောင်းလေးတွေသိရင်ရေးပေးပါအုန်း..love letter ကားကတည်းကကြိုက်တာ..only you
49 days ထဲက မင်းသား Jo Hyeon-jae ကိုပြောတာလား... အဲဒိကားကြည့်မယ်နဲ့ မကြည့်ရသေးဘူး... သူ့ကာ3းdads one mom ရော ကြည့်ပြီးပြီလား... သူက ခုမှ စစ်တပ်ကထွက်လာပြီး ပြန်ရိုက်နေတယ်လေ... အဲ 49days ကသူပြန်ထွက်လာပြီးမှရိုက်တာ ဟုတ်သား.. ဟီး...
ဂျပန်ကားတွေအကုန်လဲ ကြည့်ပြီးပြီပေါ့? Only You လဲ မကြည့်ရသေးဘူး... အစပိုင်းကြည့်ပြီး ပျင်းလို့ မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး... ပြန်ကြည့်ရမယ်...
only you ကရှေ့ပိုင်းနဲနဲပဲဇတ်ရှိန်မတက်လို့မကောင်း
တာကို ဟီး..3dad နဲ့ဂျပန်ကားတွေအားလုံးလဲကြည့်ပြီးပြီ..အဲ့မင်းသားက
ကြည့်ပြီးပြီ..ခုဆိုပေါင်၁၄၀ကနေ၁၈၀ဖြစ်သွားပြီ :D ၇ုပ်ရှင်ပဲထိုင်ကြည့်တာ
ပို့စ်လေးကဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ နောက်လည်းရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ မဗေဒါညွန်းတဲ့ကားတွေကိုလဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်။
secret garden ကတော့ပါမှပါပါ့မလားလို့ နောက်ဆုံးပိတ်လေးမှာကိုး။ ဟီဟီး။အဲ့ကားကိုကြိုက်လွန်းလို့ အရူးအမူးပဲ။
အကြိုက်ဆုံးတွေကတော့ ကိုရီးယားကားတွေပဲ။ ဒရမ်မာကြည့်တော့မယ်ဆို ကိုရီးယားကိုအရင်စဉ်းစားတယ်။ rating ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသား မင်းသမီးပါမှပဲ ကြည့်တယ်။ မင်းသား မင်းသမီး ၂ယောက်လုံးကိုယ်ကြိုက်တာဆိုရင်တော့လာထားပဲ။ မင်းသားပဲ ကြိုက်ပြီး မင်းသမီးကမကြိုက်ရင်လည်း သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။
ဂျပန်ကတော့ အစ်မပြောသလိုပဲ (bcuz of their culture) ကုကိကုကနဲ့ စကားကလည်းနားထောင်လို့မကောင်းသလို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးပြောတတ်လို့ ကြည့်ကိုမကြည့်တာ။
တိုင်ဝမ်ကလဲ ကိုယ်ကစာစကားနားလည်ပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်တာအိုဗာတွေဖြစ်လွန်းပြီး ပေါတောတောဆန်လို့ တစ်ပိုင်းတောင်ပြီးအောင်မကြည့်နိုင်ဘူး။
Korean movie: A moment to remember (Woo-sung Jung, Ye-jin Son) << i watched this so many times.
Korean drama: Secret garden (hyun bin and ha ji won) << so in love with this drama! :D
my girl (lee dong wook and lee da hae) << funny and lovely
my sassy girl (with jung ji hyun) << i like jung ji hyun and this drama is so entertaining!
scent ofawoman (with lee dong wook) << love both of them! :D
3/27/2012 6:39 PM
မဗေဒါလဲ တူတူပဲ... rating ကောင်းရင်တော့ သွားကြည့်ဖြစ်တယ်... ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ မင်းသား မင်းသမီးတွေဆိုရင်တော့ အဆုံးထိ သည်းမခံနိုင်တာများတယ်... ဥပမာ The Greatest Love လိုကားမျိုး... ကိုယ်က ဒုတိယမင်းသား Yoon Kye Sang ကိုကြိုက်တာ... ဒါပေမဲ့ မင်းသမီးကိုမကြိုက်တာရော... ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသားက ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ မင်းသမီးကြီးကို တန်းတန်းစွဲကြီးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးလဲ ရမှာမဟုတ်တော့ ဖီးလ်မလာတော့ဘူး...
Boy over flowers လဲ အဲလိုပဲ... ယှဉ်ချင်လို့သာ အဆုံးထိ သည်းခံပြီးကြည့်တာ... လုံးဝ ဖီလ်းမလာဘူး...
ခု အရမ်းစွဲနေတဲ့ ကားတစ်ကားထွက်ပြန်ပြီ... Rooftop Prince တဲ့... ခုပြနေတုန်း... မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်လိုက်... ရီရတယ်... မင်းသားက Milky Yoon Chun... သူ့ကြိုက်တယ်...
A Moment to remember က ငိုရတယ်... ဒါပေမဲ့ အဲလိုကားမျိုးက ရင်ထဲစွဲကျန်တယ်...
My girl ကိုလဲ ကြိုက်တယ်... ၃ခါရှိပြီ စဆုံးကြည့်ြ်ဖစ်တာ... ခွေပါဝယ်ထားတယ်... ဒါပေမဲ့ အကြိုက်ဆုံး အတွဲထဲမှာတော့ မှတ်မှတ်ရရ မရှိလို့...
My sassy girl ကသိပ်မကြိုက်ဘူး... I don't know why...
Scent of woman လဲ ဇာတ်လမ်းသိပ်မကြိုက်ဘူး... မင်းသားမင်းသမီးတော့ ကြိုက်တယ်...
ဒီပို့စ ဖတ်ပြီး ကားကောင်းလေးတွေ ပြန်ပြောင်း အောင့်မေ့သွားတယ် ဘာကားမှ ကြည့်ဖို့ ဖီးမလာတုန်းက it's started withakiss နဲ့ secret garden ကို ဘယ်နခေါက် မြောက် မှန်းမသိ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ် ပြန်ကြည့်တော့လဲ စကြည့်တုန်းက ဖီလင်အတိုင်း သူတို့ အတွဲလေးတွေကို ချစ်နေတုန်းပဲ :D